Iyo itsva vhezheni yeLinux Kernel 4.20 yakatoburitswa | Linux Vakapindwa muropa
Iyo nyowani vhezheni yeLinux Kernel 4.20 yakatoburitswa
Maawa mashoma apfuura uye Mushure memwedzi miviri yekuvandudza, Linus Torvalds akazivisa vhezheni itsva yeLinux Kernel 4.20.
Izvo pakati shanduko dzinonyanya kuzivikanwa mune iyi nyowani vhezheni yeKernel 4.20 Zvitsva zvitsva zvinosanganisirwa izvo zvakagadziriswa zvakasiyana siyana zvakawedzerwa maererano nezvikanganiso uye pamusoro pese kutsigirwa kwemidziyo yakasiyana.
Mune iyi vhezheni itsva yeLinux Kernel 14,997 zvigamba zvakagadzirwa kubva ku1857 vagadziri kune iyo nyowani vhezhenisaizi yechigamba yaive 49MB (shanduko dzakabata mafaira 11,402 686,104, mitsara 318945 yekodhi yakawedzerwa, mitsara XNUMX XNUMX yabviswa).
Inenge 47% yeshanduko dzese dzakapihwa muna 4.20 dzakabatana nemadhiraivha edhizaivhi, ingangoita 17% yeshanduko inoenderana nekuvandudza yakatarwa kodhi yezvivakwa zvehardware, 14% zvine hukama nesitaki stack, 3% mafaera masystem uye 4% ari zvemukati kernel subsystems.
1 Chii Chitsva muLinux Kernel 4.20?
1.1 Speck yaenda
1.2 Zvitsva zvitsva
2 Uye iyo Kernel 5.0 yeiyo rinhi?
Chii Chitsva muLinux Kernel 4.20?
Nechibuditswa chitsva ichi, tsigiro yeC-SKY processor yekuvaka yakawedzerwa pamwe neye taprio traffic scheduler, iyo PSI (kumanikidza kudzivirira ruzivo) subsystem, P2P DMA yePCI.
Kunze kwezvoe yakawedzera chiratidzo chekugadzirisa kodhi kugadzirisa zvekare, kubatana kwe cache network kutapurirana dissectors muiyo nyowani XArray chimiro, kusanganisa amdgpu uye amdkfd madhiraivha, kuwedzera mashandiro eiyo FUSE subsystem, iko kugona kusefa network mapaketi zvichienderana nesecmark tag, ichibvumira nested virtualization yeKVM.
Iyo inopokana Speck ichangobva kuwedzerwa neLinux 4.17 muKernel encryption algorithm yakabviswa muLinux 4.20.
Sezvo Google yakabvisa kuvimba kweiyo chaiyo yakatarwa Android kodhi. Izvi zvaisakonzerwa netekinoroji, sezvo algorithm yakagadziriswa neNSA.
Uye kumisikidzwa kweizvi kwakarambwa, sezvo NSA yanga isingade kupindura yakadzama mibvunzo nezve algorithm.
Uyewo, virtualization yakawedzeredzwa neKVM, iyo ikozvino inogonesa chaiwo michina kuburikidza neyakajeka nested mumushini chaiwo.
Tsigiro inowanikwawo yeiyo Raspberry Pi Model 3. Mune ramangwana, iyo TCP stack ichaendesa mapaketi ane algorithm nyowani, iyo isingafanire kungokurumidza chete asi zvakare kuchengetedzeka.
Iyo itsva "taprio" traffic scheduler yakaitwa mune ino kernel, iyo inobvumidza manejimendi kutumirwa kwemapaketi zvinoenderana neyakagadzirwa kare nguva dzakateedzana.
Maitiro ekuronga anotsanangurwa muIEEE 802.1Qbv kududzirwa, inofunga zvinodikanwa zvekufambisa nguva-inonzwisisika traffic yekutakura packet (semuenzaniso, vhidhiyo uye odhiyo rukova), uye inoshandisa akasiyana nguva masiketi emakirasi akasiyana e traffic.
Nezve rtnetlink protocol, yakasimba nzira yekutarisa inoitwa ("Hard cheki"), iyo inovimbisa kuti ruzivo rwakakodzera rwunopfuudzwa kunzvimbo yemushandisi inoenderana nechikumbiro chiri kuuya;
Wakawedzera kugona kusefa marara neruzivo rwekufambisa nemitemo yakashandiswa (semuenzaniso, kupatsanura nzira kubva kumadhimoni akasiyana emhando), mhando dzenzira (semuenzaniso, kupa unicast)
Iyo ID yetafura yekufambisa uye iyo yepedyo gedhi (nexthop).
Mafirita akadaro akareba akatsigirwa muiproute2, asi akaitwa munzvimbo yemushandisi. Kufambisa mafirita kune kernel nzvimbo inokutendera iwe kuti uwedzere kushanda kweakakura maLinux-based routing masisitimu.
Mune network yekukorobha yekumisikidza (yekudhira subsystem), kugona kuona VLAN manhamba mune mamiriro ezvimwe zviteshi zvakawedzerwa;
Tsigiro ye5 ne6 chiteshi cheiyo 60 GHz bhendi yakawedzerwa kune ieee80211 isina waya stack, pamwe nekugona kugonesa FTM Responder mashandiro kubva kune mushandisi nzvimbo..
Uye iyo Kernel 5.0 yeiyo rinhi?
Pakupedzisira, vazhinji vaitarisira kuti iyo kernel nyowani ingangofanana neshanduko kuenda pa4.0 kubvira mushure me4.19 vhezheni 5.0 yave kutarisirwa ikozvino.
Nekudaro, sezvo Torvalds isingade kugadziriswa muchirongwa, zvakanzi Linux 5.0 ichauya mu2019. Kunyangwe zuva rinofungidzirwa risingazivikanwe, kubvira panguva ino marongero eiyo inotevera vhezheni anoenderera neshanduro 4.21.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Iyo nyowani vhezheni yeLinux Kernel 4.20 yakatoburitswa
Chinyorwa chakanakisa, senguva dzose. Nguva dzese pandinoona kuti yangu Fedora inotora kernel nyowani ndinomira nayo kuti ndione zvayingadzose.
Iyo itsva vhezheni yeMX Linux 18 yaburitswa